Mihevitra Hanangana ‘Fandraharahana Nasionalin’ny Lahatahiry Goavana’ i Rosia Hifehezana Ny Lahatahirin’ny Mpiserasera Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Mihevitra Hanangana ‘Fandraharahana Nasionalin'ny Lahatahiry Goavana’ i Rosia Hifehezana Ny Lahatahirin'ny Mpiserasera Aterineto
Voadika ny 01 Jolay 2016 9:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, srpski, русский, English
Mihevitra ny manampahefam-panjakana fa mety hanampy amin'ny fiarovana ny mombamomba ny Rosiana tsirairay an-tserasera ny [fitaovana] fanarahamaso ny “lahatahiry goavana” an'ny firenena. Sary avy amin'ny Pixabay.
Manana ahiahy amin'ny “big data” na lahatahiry goavana ny manampahefana Rosiana. Ary ny tena ahiany dia ny lahatahiry mombamomba ny Rosiana tsirairay mpiserasera aterineto. Ary dia mieritreritra ry zareo fa ny fametrahana lalàna amin'ny fomba hanangonana, hitehirizana, ary hiarovana izany lahatahiry izany bebe kokoa no mety hahavoaaro kokoa ireo Rosiana mpisera aterineto.
Nanolo-kevitra i Aleksandr Zharov, Lehiben'ny Sampan-draharaham-panjakana Rosiana mpandamina ny aterineto Roscomnadzor, fa afa-manangana “mpanao raharahan-dahatahiry goavan'ny firenena” iray i Rosia ahafahana mifehy ny hanaovana ny lahatahirin'ny mpiseraseran'ny RuNet. Raha niteny nandritra ny fihaonana ara-toekarena iraisampirenena iray tao Saint Petersburg i Zharov dia nanoritra fa mila asiana lalàna ny resaka fampiasana ny lahatahiry goavana [big data], satria mety hamantarana ny mpiserasera ihany, na dia tsy azy manokana aza, ny fampahafantarana marobe.
Tsy maintsy mamaritra ny fitsipika amin'ny fampiasana ny lahatahiry goavana ny fanjakana, ny [sehatry ny] fandraharahana ary ny fiarahamonina. Lahatahiry goavana [Big data] dia midika zavatra maro azo atao, saingy midika mety isian'ny loza amin'ny ambaratonga rehetra ihany koa. Ka izay no tokony isian'ny lalàna momba ny lahatahiry goavana.
Nitatitra ny sampam-baovao RBC fa raha mbola tsy misy ny drafitra efa vonona avy hatrany momba ny lalànan'ny lahatahiry goavana, dia mety hahita masoandro ihany izany atsy ho atsy.
Nanoritra ny dekàn'ny [tandapan'ny] Filoha Putin, Igor Shchegolyev, izay nanatrika ihany koa ilay fihaonana tao Saint Petersburg, fa amin'izao fotoana izao, na dia ny mpandrafitra fampihatra mora indrindra aza dia mety hahazo tsy misy sakatsakana ny lahatahirin'ny mpisera, ary nolazainy fa amin'ny lalàna vaovao dia efa nahazoana alalana avy amin'ny mpisera ihany vao azo tanterahina ny fanangonana na fandefasana ny lahatahirin'ny mpisera. Ao anatin'izany rehetra izany anefa dia mbola tsy mazava ny toetoetry ny paika fanarahamaso ho apetraky ny fanjakana amin'izany lalàna izany.
Lalànan'ny lahatahirin'ny mpisera efa misy
Efa manana lalàna ifehezana ny fomba hitehirizana sy ampiasana ny lahatahiry manokan'ny tsirairay i Rosia. Efa nanankery tamin'ny voalohany septambra 2015 ny lalànan'ny fametrahana fangitra lahatahiry ka mametraka fa tsy maintsy mitahiry ny lahatahirin'ny Rosiana ao anatin'ny sisintany rosiana ny orinasa rosiana sy iraisampirenena. Teren'ny lalàna ihany koa ny mpanao raharahan'aterineto hitahiry ny lahatahirin'ny mpiserasera ao anatin'ny enimbolana farafahakeliny. Afa-tsy manatontosa izany fitakiana hitahiry ny mombamomba ny mpiserasera ao anatin'ny tany Rosiana izany koa ny andrim-pitantanana sasantsasany hoy ny masoivoho sy kaonsilà vahiny, ny servisy fivarotana tapakilam-piaramanidina ary ny fampitam-baovaom-bahoaka be mpanaraka.
Efa nanao fisavana orinasa miisa 600 manamarina raha efa manaja ny tsy maintsy hametahana fangitra amin'ny lahatahiry ny Roscomnadzor, ary nahita fa efatra ny isan'ny nanitsakitsaka ny lalàna. Nampanantena ny mbola hanao fisavana orinasa 900 hafa ny sampandraharaha mandra-pahatongan'ny faran'ny taona 2016, ka ao anatin'izany ny tambajotra rosiana lehibe indrindra, VKontakte.
Nilaza i Zharov, lehiben'ny Roscomnadzor, fa manana fahefana ny mpampihatra lalàna hanao fisavana izay orinasa rehetra mampiasa ny lahatahirin'ny Rosiana mpiserasera, tsy ijerena izay fari-piadidiana na hoe manana birao ao Rosia, raha mitodika any amin'ny fifampiraharahana ifanaovana amin'ny tranonkala tahaka ny Twitter sy ny Facebook amin'izao fotoana izao.
Raha mahita fanitsakitsahan-dalànan'ny [lahatahiry voafangitra] izahay, dia hifampiraharaha manokana amin'ny toe-draharaha tsirairay avy. Ary hanome fehim-potoana ampy ho an'ny orinasa hizotra amin'ny fametrahana fangitra ny lahatahiry, fa tsy “hanakatona azy” avy hatrany.
Navoitran'i Zharov fa rehefa “mitsipaka ankitsirano” amin'ny fanatanterahana ny lalànan'ny fametrahana fangitra ihany ny mpampihatra ny lalàna avy amin'ny fanjakana fa mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Raha nanambara ny fizorany any amin'ny fanatanterahana ny fametrahana fangitra ny orinasa sasany, tahaka ny PayPal sy ny Booking.com, dia mbola manakombo-molotra kokoa amin'ny fomba hanajana ny fameperana ao Rosia napetraky ny lalàna vaovao kosa ny hafa, ary tafiditra amin'izany ny Facebook sy ny Twitter. Efa nilaza ny mpandala ny zon'olombelona sy ny mpanandratenin'ny fahalalaham-pitenenana fa manamora kokoa ny fanarahamason'ny fanjakana amin'ny Rosiana mpiserasera ny lalànan'ny fitazonana lahatahiry ka efa nataony ny antso handavana ny hitehirizana ny lahatahirin'ny mpiserasera ao anatin'ny sisintany Rosiana.